Lusasebenza kahle uhlelo lokubhalisela umazisi online - Umbiko | News24
Lusasebenza kahle uhlelo lokubhalisela umazisi online - Umbiko
Pretoria – Izinkulungwane zabantu zibhalisele amakhadi omazisi kanye namaphasiphothi online ngemuva kokuthi uMnyango wezaseKhaya uthole uxhaso emabhange amakhulu ukuze kuqhutshwe lolu hlelo.
UMqondisi-jikelele walo mnyango uMkuseli Apleni uthe: “Uhlelo lwe-eHomeAffairs luqale ngesonto eledlule kanti kuze kube manje, bangu-4088 abantu asebebhalisele omazisi kanti bangu-140 abanezicelo eseziphumelele.
“Kwakuhamba kancane ngosuku lokuqala ngoba kwafakwa izicelo ezingu-229, zaba ngu-1687 ngosuku lwesibili kanjalo kanjalo.”
OLUNYE UDABA:Zimkhalele ozame ukusebenzisa umazisi womunye
U-Apleni uthe lolu hlelo luzosiza izakhamuzi zakuleli zikwazi ukubhalisa futhi zikhokhe zisemakhaya noma emisebenzini. Kuyashesha kanti futhi ayisekho indaba yokuma emigqeni emide emahhovisi alo mnyango.
Amabhange abambe iqhaza kulokhu i-ABSA, First National Bank, Nedbank kanye ne-Standard Bank. Kanti okwamanje lolu hlelo lundlalelwe kumagatsha angu-11 alawa mabhange, kubika i-IOL.